ကမ္ဘာကြီး ciencia ဗဟုသုတများစွာပါ ၀ င်သည်။ ဤနေရာတွင်သိပ္ပံပညာကိုခံစားရန်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုသင့်အားကမ်းလှမ်းပါမည် မိုးလေဝသမင်းတို့အရာရာတိုင်းကိုပျော်မွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးငါတို့ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုကောင်းကောင်းသိထားခြင်းကအခြေအနေကိုပိုပြီးလွှမ်းမိုးစေတယ်ဆိုတာမမေ့နိုင်ဘူး။
အချက်အလက်, ယေဘုယျအားဖြင့်သတင်းအချက်အလက်, သဘာဝကဖြစ်ရပ် နှင့်ရှည်လျားသောစသည်တို့ကို ဒါကဒီအာကာသကိုယေဘုယျအားဖြင့်ဗဟုသုတရဖို့အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပြီးသိတဲ့သူကသိပ္ပံလိုရှုပ်ထွေးတဲ့ဘာသာရပ်အကြောင်းစိတ်အားထက်သန်စေသည်။
por ဂျာမန် Portillo လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်ပေါင်း .
ဒိုင်နိုဆောတွေ ဘယ်လိုမျိုးသုဉ်းသွားတယ်ဆိုတာကတော့ လူတော်တော်များများနဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ အံ့သြစရာပါပဲ။ သို့သော် ၎င်းကို မသိရ…
ကမ္ဘာသည် ၎င်း၏ဝင်ရိုးပေါ်တွင် အဖျားတက်နိုင်သည်။
ဒိုင်နိုဆောတွေ ကမ္ဘာမြေပေါ် လျှောက်သွားတဲ့အခါ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 84 သန်းလောက်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ဟာ ဇောက်ထိုးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ပိုတိတိကျကျပြောရရင်…
ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် ကြီးမားသော ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများ
por ဂျာမန် Portillo လွန်ခဲ့တဲ့4ရက်သတ္တပတ် .
ယနေ့ခေတ်တွင် အကြီးမားဆုံးပြဿနာတစ်ခုမှာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရာသီဥတုအကျပ်အတည်းကို လျှော့မတွက်ဘဲ...
ဗွန် ကာမန် ချောင်းများ
por ဂျာမန် Portillo လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လ .
Turbulence သည် သဘာဝတွင် ရှိနေသည်သာမက၊ မည်သည့်နည်းဖြင့် ရှုမြင်သည်ဖြစ်စေ ၎င်းသည် အလွန်လိုအပ်သော...
Boyle's Law ကို XNUMX ရာစုတွင် Robert Boyle မှရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးရှင်းပြရန်အုတ်မြစ်ချခဲ့သည်...
လေသည် ကပ်လျက်နေရာနှစ်ခုကြားရှိ ဖိအားကွာခြားမှုဖြင့် ဖန်တီးထားသော လေထုထု၏ရွေ့လျားမှု၊...
ဘူမိသံလိုက်မုန်တိုင်းများသည် နာရီအနည်းငယ်မှ ရက်အနည်းငယ်အထိ ကြာရှည်သော ကမ္ဘာ့သံလိုက်စက်ကွင်းအတွင်း အနှောင့်အယှက်များ...
တရုတ်နိုင်ငံရှိ ယန်ဇီမြစ်သည် စုစုပေါင်းအရှည် ကီလိုမီတာ ၆၃၀၀ ခန့်ရှိပြီး ဧရိယာအကျယ်အဝန်းရှိသော အထင်ကြီးစရာကောင်းသော မြစ်တစ်စင်းဖြစ်သည်။
ဂေဟစနစ်ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို လူတော်တော်များများ မသိကြဘူး။ ဂေဟစနစ်များသည် ဇီဝဗေဒစနစ်များ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် အကျိုးပြုသော သက်ရှိအုပ်စုများ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ...
ကမ္ဘာ့အဆင့်မြင့်ကမ္ဘာ့စူးစမ်းလေ့လာရေးဂြိုလ်တုကို Vandenberg လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းမှလွှတ်တင်...
ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် နှစ်သန်းပေါင်း 4.500 ကျော်ရှိသည်။ ဒီတခေါက်မှာ အပြောင်းအလဲတွေ အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်...
Mesozoic ခေတ် - မင်းသိဖို့လိုအပ်သမျှ
Precambrian Eon: မင်းသိထားသင့်သမျှ
Cenozoic ခေတ် - သင်သိရန်လိုအပ်သမျှ
Alfred Wegener ကဘယ်သူလဲ။
သမုဒ္ဒရာရိုင်း: မူရင်း, ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဒိုင်းနမစ်
နွေ ဦး ရာသီ equinox